Andavamamba: nirefotra ny basy, dimy lahy nandroba farmasia | NewsMada
Nirefotra intelo ny basy teny Andavamamba. Farmasia iray voatafika tamin’izany, vehivavy iray naratra mafy ary nalefa hopitaly. Andian-jiolahy dimy ireo nanafika teny an-toerana ireo.
Tamin’ny 3 ora tolakandro teo, notafihina dimy lahy nitondra basy ny farmasia iray eny Andavamamba, omaly. Niditra an-keriny tao anatiny izy ireo ary nidaroka avy hatrany ny vehivavy iray mpitam-bola. Tsy nisy nahetsika na ny mpiasan’ny farmasia na ny mpividy fanafody tao anatiny, nanoloana izany. Norobain’ireo jiolahy ny vola rehetra tao amin’ny fitanam-bola sy tany amin’ny mpividy fanafody. Tsy mbola voafaritra ny vola izay lasa, araka izany.
Nanapoaka basy intelo ireo olon-dratsy tamin’ny fitsoahan’izy ireo. Nazava ny lalana nitsoahany an-tongotra ary nitsoaka nihazo ny amdadiky ny LTC Ampefiloha iny ireo jiolahy. Tonga teny an-toerana ny polisy ary nahitana taim-bala telo teny an-toerana. Nisy ny fanarahan-dia nataon’ny polisy, saingy tsy tratra intsony ireo mpanafika tao anatin’ny fotoana fohy nisehoan’ny fanafihana ; efa maty paika ny asa ratsin’ireo jiolahy. Tsy nisy nahatsikaritra ihany koa izy ireo, na tsy nisaron-tava aza.
Fanafihana farmasia fanindroany
Fanindroany izay no nisy farmasia voatafika ary tsy mifanalavitra teo ny iray, fa teo Ampefiloha ihany. Nisy mpividy fanafody iray maty notifirin’ny jiolahy tamin’izany. Mety ireto andian-jiolahy ireto ihany ireo nanafika omaly ireto.
Lasibatra indray ny farmasia amin’izao. Efa misy ihany ny mandray fepetra amin’ny fametrahana “camera” amin’ireny toerana ireny, ny fampanarahana fepetra ny olona mpanjifa sns. Na izany aza, maneho ny endriky ny tsy fandriampahalemana eto an-tanàna hatrany izao.